Maxaa Kajira in Maraykanka u aqoonsanaya Buuraha Golan Heights dhul ay Yuhuudu leedahay – Radio Daljir
Maxaa Kajira in Maraykanka u aqoonsanaya Buuraha Golan Heights dhul ay Yuhuudu leedahay
Maarso 22, 2019 6:05 b 0
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in la gaaray waqtigii Maraykanku uu u aqoonsan lahaa buuraha Golan Heights oo ay Yuhuudu ugaga qabsatay Syria dagaal.
“Kadib 52 sano waa waqtigii Maraykanku uu si buuxda ugu aqoonsan lahaa lahaanshaha Israel Golan Heights,maadaama ay u tahay meel istiraatiiji ah muhiimadna u leh amniga dowlada Israel iyo guud ahaan gobolkaba.”ayuu ku soo qoray boggiisa Twitterka Trump isagoo aan bixin faahfaahino dheeraad ah.
Mowqifka cusub ee dowlada Maraykanka ayaa ku soo beegmaysa maalmo kahor booqasha la filayo inuu Washington ku tago ra’iisul wasaaraha Israel.
Hase yeeshee,xoghayaha arrimaha dibbada Maraykanka Mike Pompeo oo joogay magaalada Qudus ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo warkan ka soo yeeray Madaxweyne Trump.
Israel ayaa ka qabsatay inta badan Golan Heights Syria dagaalkii lixda maalmood socday ee 1967dii,waxayna ku dhowaaqday in deegaankaas uu ka mid yahay dalkeeda sanadkii 1981kii balse ma jirto cid caalamka ka tirsan oo aqoonsatay.
Daqiiqado yar kadib, makii uu Trump ku dhowaaqay warkan ayaa waxaa ka mahadceliyay Netanyahu ra’iisul wasaaraha Israel isagoo sheegay in go’aankan uu ku soo beegmay xilli Iran ay dooneyso in ay Syria u adeegsato meel ay ugaga soo duusho Israel oo ay ku baabi’iso.
Madaxweynaha Maraykanka ayaa hore go’aan kan la mid ah waxa uu u gaaray sanadkii 2017 kadib markii uu u aqoonsaday magaalada Qudus inay tahay caasimada Israel.
Waa Maxay Golan Heights?
Golan Heights waa dhul buuraley ah oo ku yaal Koofurgalbeed dalka Syria waxana uu leeyahay muhiimad siyaasadeed iyo mid istiraatiiji ahba.
Israel ayaa ka qabsatay Golan Heights dalka Syria marxaladihii ugu dambeeyay ee dagaalkii lixda maalmood socday ee dhacay 1967,Inta badan Carabtii Siiriyiinka ahayd ee degeneyd waxa ay ka carareen intii uu socday dagaalka.
Balse dowlada Syria ayaa isku dayday sanadkii 1973kii inay dib u qabsato Golan Heights hase yeeshee waa ay ku guul dareysatay inkastoo qasaare culus ay gaarsiisay ciidamada Yuhuuda.
Heshiis xabad joojin ah ayaa la dhex dhigey labada dhinac sanadkii 1974kii, waxana la geeyay kormeerayaal ka socda Qaramada Midoobay balse Yuhuuda waxa ay bilaabeen inay deegaameyso oo ay dad soo dejiso Golan.
Waxaana ka dhisan illaa soddon deegaano ay Yuhuudu degen yihiin iyadoo dadka la soo dejiyay lagu qiyaasay illaa labaatan kun, waxaana sidoo kale weli degan illaa labaatan kun oo qoys oo Siiriyaan ah gaar ahaan Druzka.
Muhiimada Halka ay ku taal Golan Heights.
Koofurta Syria iyo weliba caasimada Dimishiq waxa ay u jirtaa buurahan illaa 60 km (40 miles) kaliya,waxaan dusha sare ee buuraha laga arki karaa dhaqdhaqaaqa ciidamada Syria ee ku sugan caasimada iyadoo ay fududahay in la duqeeyo.
Sidoo kale waxaa halkan laga helaa biyo waana isha ugu badan ee beeraha laga waraabiyo,marka saddex meel loo qeybiyo ilaha biyaha Israel ayaa meel ka mid ah laga soo saaraa Golan Heights.
Arday qalinjabinayay oo dalxiis ku jiray oo ku geeriyooday duleedka Bosaso